Guyyaa Har’aa Seenaa Keessatti: Buulchiinsa Badhaafamtoota Noobeelii Lamaanii Jalatti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGuyyaa Har’aa Seenaa Keessatti: Buulchiinsa Badhaafamtoota Noobeelii Lamaanii Jalatti
Guyyaa Har’aa Seenaa Keessatti: Buulchiinsa Badhaafamtoota Noobeelii Lamaanii Jalatti
1. Ji’a Torba har’aa Haceen galaafatame. Gaggeessaan isaa fi awaalchi isaallee salphifamee gara balleeffame. Finfinnee inni ciniinnatee dubbataafii ture keessatti gaggeessaa dhabe. Oromootu biyya bulcha sanuu kan Noobeelii Nageenya badhafame jedhamee ololamaa ture.
2. Ji’a Torba har’a Jawaar Mohaammad’faa dabalatee hoogganootni Oromoo qaqqaaliin hoogganaa biyyaa Noobeelii Nageenyaa badhaafameen sababa ejjennoo siyaasaaf Oromummaa isaaniitiin hidhaman.
3. Ji’a Torba har’aa sababa hiriira mormii ajjeefamuu Hacaaluutiin Qeerroo fi Qarreen qaqqaaliin 200tti dhiyaatan ajjeefaman, kumootni hedduun hidhaman. Magaalaa Ambo qofa guyyaa tokkotti nama 34tu ajjeefame. Kun Bulchiinsa Badhaafamaa Noobeelii Nageenyaa jalatti ta’e.
4. Jawaar Mohaammad faa erga lagannaa nyaata eegalanii har’a guyyaa 5ffaa dha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka fooyya’aatti akka jijjiiramu, dararaa maatiirra gahu akka dhaabbatu mootummaa Abiyyi Ahmad, ka Noobeelii Nageenyaa ‘badhaafame’ gaafachaa.
5. Noobeelii Nageenyaa moo’udhaan faallaa akeekaa Noobelichaa hojjechuun beekamtu Aung San Suu Kyi kan jedhamtu uummata Rohiingiyaa kan ficcisiiftee kaan biyyaa ariite har’a aangoorraa garagalfamtee waraanaan hidhamtee jirti.
Hojii gaarii keetu siif gaarii dha. Kaan gaafa sirratti ka’uu fi ragaa ta’u eeggata malee inuma sirratti hojjeta. Kanaafuu, hammeenyarraa deebi’i. Ai uummataaf jecha kufii aarsaa of godhi malee, gaarri (uummatni) sirratti hin jigin!
Abiyyi guyyaa boruu hiriira deeggarsaa naaf bahaa jedhee ummata kadhachaa jira. Ummanni ammoo akka rabbiin haadha irree Miyanaamaar duukaa karshallee isa galchu rabbiin kadhachaa jira.
الم نهلك الأولين ثم نتبع هم الاخرين كذلك نفعل باالمجرمين
Muummittiin ministeeraa Nymaar kan Noble badhaafamtee fi Muummicha Ethiopia kan Noble fudhate warra haadha hiyyeessaa boochisaa turan keessaa tokko hir’atteetti.
Jaartiin to’annaa jala Oolteetti!
Kan Namichaas dhiyootti!
በቅፅል ስሟ ተመዘግዛግዋ ዘንዶ ተብላ የሚትታወቀውና የዓለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚ የማይናማሯ ፕሬዝዳንት ሳን ሱ ኪ በወታደሮቿ በቁጥጥር ስር ውላለች ተበለ፡፡ የሮሂንጊያ ሙስልሞች ላይ የፈፀመችውን ዘግናኝ ጭፍጨፋ ማን ይረሳል፡፡
Rabbiin Lakka’et namaaf deebisa!
Finfinneen Gubachaa Bulte!